Iskudhac u dhaxeeyey Ahlu-sunna iyo ciidan maamulka Hiiraan ah oo ka dhacay Matabaan. – Radio Daljir
Iskudhac u dhaxeeyey Ahlu-sunna iyo ciidan maamulka Hiiraan ah oo ka dhacay Matabaan.
Luulyo 29, 2012 12:49 g 0
Mataban, July 29 ? Iskudhac u dhaxeeeya ciidamada maamulka gobolka Hiiraan iyo kuwa Ahlu-sunna Waljameeca ayaa maanta ka dhacay degmada Matabaan oo gobolkaasi ka tirsan.
Iskudhacaasi, ayaa la tilmaamayaa in ay ka dhasheen khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac iskugu jira kaasoo soo gaaray dhinacayadii dirirtu dhax-martay iyo dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan sida ilo-wareeddo kala duwani noo xaqiijiyeen.
Ma cadda sababta rasmiga ah ee dhalisay weerarkaasi, hase ahaatee guddoomiyaha degmada Matabaan ee maamulka Ahlu-sunna Wajamaaca ayaa Radio Daljir u sheegay dhacdadaasi in ay hormuud u ahaayeen mas?uuliyiin maamulka gobolka Hiiraan ka tirsan oo uu hoggaaminayey guddoomiyaha dawladdu gobolka u magacawday ee Cabdifitaax Xasan Afrax, kaasoo sida uu sheegay ciidan ku soo weeraray degmada.
Ma jiraan ilo kale oo madax bannaan, muujinayana sida wax u dhaceen iyo sababta keentay, hase ahaatee muddo waxaa gobolka Hiiraan ka taagnaa tabashooyin ka imaanaya maamullada hoose degmooyinka Hiiraan iyo dadweynaha oo ku saabsanaa ku qanacsanaan la?aan qaabka maamulka gobolku u maareeyeen xaaladaha gobolka ku xeeran.